Maxaa Macno Tiray Maqaamka Muqdisho? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Maxaa Macno Tiray Maqaamka Muqdisho?
Maxaa Macno Tiray Maqaamka Muqdisho?
Muqdisho (XT): Waxaa la yaab leh, walina ay dad badan is waydiinayaan magaalada Muqdisho oo ah caasimadii Soomaaliya sababta aysan dadka deggan xuquuq siyaasadeed uga helin aqalka sare ee Barlamaaka. In ka badan laba Milyan ayaa lagu qiyaasaa dadka deggan Muqdisho kuwaasoo u baahan in ay helaan matalaad siyaasadeed oo ay ku badashaan canshuuraha ay bixiyaan oo inteeda badan lagu kabo dowladda dhexe.
Dowladda Soomaaliya ayaa maamul goboleedyada dhisan haatan bil walba ku kabto miisaaniyadooda lacago kor u dhaafaya 250 Kun oo Doollar mid walba sida ay noo xaqiijiyee ilo xog ogaal ah oo ka tirsan xukuumadda. Ma xuma in la kabo maamullada dekadaha u shaqeeyaan sida Puntland iyo Jubaland iyo kuwa aysan dekadahooda shaqeyn sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed balse in magaaladii dadkeedu canshurta ay bixiyaan lagu kabayay gobollada kale in matalaad siyaasadeed loo diido yaa ka masuul ah?
Masuuliyiin kala duwan ee kasoo jeeda gobolka Banaadir oo isugu jira dhaqan, ganacsato iyo siyaasiyiin ayaa Xaqiiqa Times u sheegay in madaxda dowladda ugu sarreeysa , gaar ahaan madaxweyaha iyo maamulka Gobolka Banaadir ay qeyb ka yihiin xaqiraadda loo geystay bulshada Muqdisho.
Hase yeeshee Madaxweynaha ayaad moodaa inuu isku khaldayo masuuliyaddii uu Soomaaliya uu u hayay iyo xuquuqda gaarka ah ee reer Muqdisho. Sidaa darteed, waxaa muuqata in dadka reer Muqdisho ay bilaabeen in ay ka dhiidhiyaan qorshahan iyaga oo mudaharaadyo ka dhigay fagaaraha daljirka Dahsoon dabaayaqadii usbuucii tagay. Waxaa xusid mudan madaxda gobollada iyo kuwa dowladda dhexeba ee duudsiiyay Muqdisho xaqeedii dhammaan waa reer Muqdisho. Waxay waqtiyo kala duwan ku noolaayeen, waxna ku barteen caasimadda. Waa Ayaan darro in dadkii caasimadda ku barbaaray ee wax ku bartay in ay qariyaan xuquuqdii ay lahayd.
Sidoo kale Muqdisho oo ah meesha kaliya ee si fudud doorasha looga qaban karo ayaan ilaa iyo hadda aan helin gole deegaan oo matala degmooyinka kala duwan ee gobolka, waxaan taas eedeeda leh xukuumadda oo aan wax masuuliyad ah iska saarin sidii loo daadajin lahaa maamulka gobolka.
Madaxdii go’aamadan gorfeeyay kama aysan fikirin khaladaadka siyaasadeed ee laga galay dadka reer Muqdisho, waana takrifal awoodeed oo lagu dafiray xuquuqihii aasaasiga ahaa.
Xal ma aha, tanaasulna ma aha in cadaalad darro laga dhigo caddaalad oo lagu fuliyo dadka gobolka Banaadir oo ah wadnihii dalka iyo meeshii dakhliga dowladdu ka imaanayay. Arrinkaas oo Madaxweynaha uu dikreeto ku ansixiyay keddib markii ay Barlamaanka go’aan cad ka soo saari waayeen ayaa waxaa msuuliyaddeeda qaadayo madaxdii go’aamisay oo ay Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ugu horreeyaan.
Inkastoo oo uu Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ku dhaqaaqay tallaabo wanaagsan oo uu ku hananayo dadka Muqdisho, haddana waxay timid xilli ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen oo lagu heshiiyay in la qadiyo caasimadda.
Haddii la rabo in Soomaaliya ay wado sax ah qaado waxaa lagama maarmaan in xuquuqaha ay dalbanayaan shacabka Muqdisho oo caddaalad ku dhisan in ay helaan.
Waa maxay xuquuqaha ay dalbanayaan?
Xuquuqaha ay dalbanayaa ayaa ah in mataalad dhab ah ay ku yeeshaan labada aqal ee Barlamaanka, matalaad siyaasadeedna ay helaan. Waxaa kale oo ay rabaan in ay doortaan maamulkooda dawladda hoose iyo golaha deegaanka. Waxaa kale oo ay u baahanyihiin in ay helaan adeeg u dhigma canshuuraha ay bixiyaan. Waxaa nasiib darro ah in tuulooyin iyo degmooyin aan shilin ku bixin maamulka Federaalka ah iyo dib usoocelinta hay’adihii dowladda in la siiyo xuquuqdii ay lahaayeen iyo wax ka badanba, Banaadirna aan lasoo hadal qaadin oo dhinac la isaga riixo kiiskeeda.
Ku xadgudubka dadka reer Muqdisho ee dhinac walba ah waxay calaamad u tahay fashilka siyaasadeed ee Federaalka iyo Dowlad Goboleedyadaba. Sidoo kale waxay daliil u tahay aragti gaabnida reer Muqdisho oo aan hadda kahor ka hadlin xuquuqdooda shacab iyo maamulba.
Maxaa ka dhalan kara caddaalad darrada Muqdisho lagu sameeyay?
Waxaa dhalan kara in magaaladu noqoto meel fowdadu ku fogaato waayo Muqdisho waa maskaxdii dalka, caddaalad darraduna waa cudur wata dhibaatooyin aad u fara badan. Haddii ay maskaxdu xumaatana jirka intiisa kale ma fiicnaan karo. Sidaa darteed fiyoobida Muqdisho waa fiicnaanta Soomaaliya.
Previous articleXubno Ka Socda Golaha Amaanka oo Muqdisho Yimid
Next articleMa Ogtahay Madaxweyne!